Valverde oo go’aansaday inuu ku soo bilaabo Paulinho kulanka Chelsea iyo sababta oo la ogaaday – Gool FM
Valverde oo go’aansaday inuu ku soo bilaabo Paulinho kulanka Chelsea iyo sababta oo la ogaaday
(Barcelona) 14 Feb 2018 Tababaraha kooxda Barcelona ayaa laga fujin waayay inuu ku soo bilaabo safka kooxdiisa laacibka reer Brazil kulanka ay u safrayaan Chelsea.
Ernesto Valverde ayaa haatan ka sii baaraan dagaya shaxdii uu ku soo gali lahaa kulanka 20-ka bishaan kooxdiisu ay la ciyaarayso kooxda tababare Antonio Conte.
Wargayska Sport ayaa sheegay in Ernesto Valverde uu go’aansaday inuu ku soo bilaabo Paulinho kulanka Chelsea, laba arin ayaana ku qasabtay inuu qaato go’aankaas.
Sababta hore ayaa ah in Paulinho uu yahay laacib jir ahaan awood leh oo sifudud aan ku daalayn, Barcelona ayaana u baahan laacib awood ciyaari kara kulanka Chelsea maadama laga doonayo inuu qadka dhexe kula dagaalo Kante iyo Bakayoko.
Sababta labaad ayaa ah in Paulinho uu sifiican u fahmayo qaab ciyaareedka Messi iyo Luis Suarez taas oo fududaynaysa inuu ka qayb qaato difaaca marka kooxda laga qaato kubadda iyo inuu caawiyo weerarka marka kooxdu ay haysato kubadda.
Paulinho ayaa sidoo kale ku fiican gool dhalinta waana sabab ka caawin karta Barcelona inuu goolal u dhaliyo kulanka Chelsea.
Gabdhaha kooxda Heegan oo ku guuleystay horyaalka kubadda gacanta Soomaaliya+SAWIRRO